एकफेर आत्म समीक्षा पनि गर्ने कि श्यामशरण र मधुरमणका कुरामा वहकिने ?
जनतापाटी डेस्क शुक्रवार, मंसिर १३, २०७६, १२:५९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत श्यामशरण र रन्जित रेले नेपालबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर अहिले एक खालको बहस सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु यो विषयमा सरकारले प्रतिक्रिया दिनुपर्ने भनिरहेका छन् ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्याल मिडिया तथा बाहिरफेरा आएका कुराहरुबारे सरकारले जवाफ दिइरहनु पर्दैन भन्छन् । उनले भने, ‘जहाँसम्म सीमाको विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने कुटनीतिक पहलको कुरा छ । हामीले गएको हप्ता कुटनीतिक पत्राचार गरिसकेका छौँ । त्यसको प्रतिक्रिया भारतबाट आइसकेको छैन ।’ सुस्ता र कालापानीको विषय परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यसै कारण छलफलका लागि कुटनीतिक पत्राचार गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई छ ।
सुस्ता र कालापानी बाहेक नेपाल–भारत सीमाका प्राविधिक विषय दुई देशका सम्बन्धित विभागका अधिकारी नेतृत्वको प्राविधिक टोलीबीच नियमित बैठक भइरहेकै छ । यो पल्ट भारतीय नक्साको कुरा आउनुअघि भदौ मै यो बैठक भइसकेको छ । सुस्तामा विवाद आएदेखि नै सुस्ता र कालापानीको विषय परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिएको थियो । यो कुरा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत श्यामशरणले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘विगतमा कालापानी क्षेत्र र सुस्तालाई नेपालले दाबी गरेको सत्य हो । यो असमझदारीलाई मित्रवत् छलफलमार्फत समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका पनि हुन् । र, छलफलको अधिकार दुई देशका विदेश सचिवलाई दिइएको हो । यद्यपि, यस विषयमा हालसम्म कुनै छलफल भएको छैन । यदि यो मुद्दाले नेपालमा त्यति ठूलो जनलहर उठाउन सक्छ भने नेपाली पक्षको अकर्मण्यताको वर्णन गरेर साध्य छैन । मेरो आफ्नै अनुभव चाहिँ के छ भने नेपाली पक्ष यो मुद्दालाई भाषणबाजीका लागि मात्र उठाउने गर्छ । तर, यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न भने अनिच्छुक छ ।’उनले त्यति मात्रै होइन आफु राजदूत हुँदा विदेश सचिवस्तरीय छलफलको एजेण्डा बनाइएको यो विषय नेपाली पक्षले हटाएको आरोप लगाएका छन् ।
श्यामशरणले द इण्डियन ऐक्सप्रेसमा लेखेको आलेखमा भनेका छन्, ‘भारतीय पक्ष नेपालको मागअनुसार ‘समान’ हुनेगरी सन्धि संशोधन गर्न र त्यसका लागि विदेश सचिवस्तरमा वार्ता गर्न सन् २००१ मै सहमत भयो। तर, त्यस्तो वार्ता मात्र एक पटक भयो । सन् २००३ मा म राजदूतका रुपमा नेपालमा रहँदा यो विषयलाई विदेश सचिवस्तरीय छलफलको एजेन्डामा राख्न आग्रह आयो । तर, त्यस विषयमा वास्तविक छलफल हुने कुनै अपेक्षा थिएन । सन्धि पुनरवलोकनका लागि छलफल गर्न हामी तयार छौँ भन्ने जवाफ दियौँ । तर, यो विषयलाई नेपाली पक्षले आफ्नो एजेन्डाबाट हटाइदियो । यसको उदेश्य भारतसँगको मुद्दालाई नेपालले गम्भीर रुपमा लिएको छ भनेर देखाउनु मात्र थियो ।’
तर, श्यामशरणको यो उद्दरणलाई तत्कालीन परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले झुठो भन्दिएका छन् । उनले श्यामशरणका कुरा झुठो भएको जिकिर समेत गरे । विहीबार दिनभर श्यामशरणको कुरा फैलिएपछि आचार्यले बेलु्की ट्वीट गर्दै श्याम शरणले नै कालापानी र सन् १९५० नेपाल–भारत मैत्री सन्धीसम्बन्धी विषय द्विपक्षीय विज्ञप्तिबाट हटाउन लबिङ गरेको कुरो खोले ।
उनले भनेका छन्, ‘सन् १९५० को सन्धीको विषयलाई द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपालले नै हटाएको भन्ने शरणको दाबीबारे त्यतिबेलाको कुरा जस्ताको तस्तै राख्नुपर्दा, शरण आफै हुन् जसले प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर) देउवाको सन् २००३ को भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी र १९५० को सन्धीलाई संयुक्त वक्तव्यबाट हटाउन लबिङ गरेका थिए ।’
आचार्य सन् २००१ देखि २००५ सम्म नेपालको परराष्ट्र सचिव रहे । उनले त्यो बेला नेपालकातर्फबाट द्विपक्षीय वार्ताहरुमा सहभागिता जनाएका थिए । आचार्यले अर्को ट्वीटमा, ‘सन् १९५० को सन्धी र कालापानीको विषय हटाउनका लागि मलाई कन्भिन्स गर्न प्रयासका लागि शरणले दुईजना प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पठाए। हामीले जोड गरिरह्यौँ र त्यो एजेन्डा जीवित राख्न सक्यौँ, त्यसमा नेपालको अडान परिवर्तन नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बुद्धिमत्तालाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ !’ भनी लेखेका छन् ।
नेपाली बुझाई र कुटनीतिक कुरा
नेपाल–भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर र नेपाल चीनबीच एक हजार ४१४ किलोमिटर सीमाना छ । सीमा समस्या सुल्झाउने कार्य जारी छ । कालापानी, सुस्ता, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर लगायत क्षेत्रमा सीमा विवाद छ । तर, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ताबारे नेपाली बुझाई अनेकथरी देखिए । कालापानी क्षेत्र नेपालले पहिल्यैदेखि दावी गरेको कुरा भारतले पनि स्वीकारेको देखियो । तर, अहिले नेपालमा बलियो रुपमा उठेको आवाज हो, काली नदीको मुहान अर्थात् लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग नेपालकै हो । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको भू–भाग आफ्नोमा पारेपछि नेपालमा नागरिकस्तरबाट लिम्पियाधुरासहितको नक्सै सार्वजनिक भयो । ‘भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि नक्सा जारी गर्दा केही फरक पर्दैनथ्यो । र, भारत पनि दबाबमा आएर छलफलका लागि तयार हुन्थ्यो’ कतिपयले यसो पनि भनिरहेका छन् ।
नेपालले पत्राचार गरेको हप्तादिन वित्दा पनि भारतबाट कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया नआउनु र पूर्व भारतीय राजदूत श्यामशरणले जम्मु र कश्मिरबारे पाकिस्तानलाई देखाउन जारी गरिएको नक्सामा नेपालले चासो राख्नु पर्ने कारण नै छैन भन्नुले नेपालमा लिम्पियाधुराबारे जति नै कुरा उठे पनि भारत छलफलका लागि तयार होला भन्ने कुराको कुनै गुन्जायस देखिएन ।
नेपालमा आम बुझाई छ, भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकै हो । तर, नेपाल भारत सीमाको प्राविधिक पक्ष हेर्ने नापी विभाग पटक–पटक भनिरहेको छ, कालापानी र सुस्ताको विषय कुटनीतिक हो र परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको जिम्मामा छ । यद्यपि, प्राविधिक विषयमा आफुहरुको सरसल्लाह र सहयोग नियमित रहने बताउँछन्, नापी महानिर्देशक प्रकाश जोशी ।
यो विषय कुटनीतिक भएकाले कुटनीतिक माध्यमबाट अघि बढीरहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, सत्तामा रहेका र सत्ताबाहिर रहेका राजनीतिज्ञले भीडलाई हेरे बोल्दा यो विषय जटिल बन्ने देखिएको छ । त्यसैको संकेत हो, श्यामशरणको आलेखीय भाषा । उनले यो विषय दुईपक्षीय सहमतिमा टुंग्याउने विषय हो भनेर पटक–पटक उल्लेख गरेका छन् । र, दलहरुको भूमिकालाई लिएर गाली पनि गरेका छन् । कुटनीतिक पहलमा जोड दिए पनि श्यामशरण नेपाल र नेपाली राजनीतिज्ञलाई होच्याउने ढंगले प्रस्तुत भएका छन् ।
यो हो, असली हविगत
अहिले हामी श्यामशरण र मधुरमणका कुरामा वहकिरहेका देखियो । तर, लिम्पिाधुरा नेपालको हो भन्ने विभिन्न कालखण्डका दस्तावेजलाई एकैछिन् पर राखेर कुरा गर्ने हो, भने । यस्तो छ, हाम्रो असली हविगत । लिम्पियाधुराको कुरा उठाउने दार्चुलाबाट तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य एवं राज्यमन्त्री प्रेमसिंह धामीको मृत्युबारे कसैले धेर सोच्दै सोचेनन् । उनको दुर्घटना प्राकृतिक थियो या कृत्रिम अर्थात् नियोजित, खोज्न आवश्यक ठानिएन । तर, उनको दुर्घटनाबारेको एउटा संकेत अझै जीवित छ । ‘२०५४ भदौ २५ गते ‘काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन’ शीर्षकमा लेख छापियो र दुई दिनपछि भदौ २७ गते सडक दुर्घटना (?) मा मृत्यु भयो ।’
पहिलो पटक यो विषयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने धामीको मृत्युअघि लिम्पियाधुरामा अनेक अवरोध गरिए, त्यसबारे पनि कोही बोलेनन् ? २०५३ साल कात्तिकमा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको संसदीय अनुगमन टोलीलाई दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद आचार्यले भ्रमण गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै चिठी पठाएका थिए । नेताहरूको तीव्र दबाबपछि मात्रै एभरेष्ट एयरलाइन्सको हेलिकोप्टरले टोली लिएर गयो । तर, त्यसअघि गोरखा एयरलाइन्सले अनेक बहाना गरेर हेलिकोप्टर सेवा नै दिन मानेन । यस्तै, २०५६ माघ २६ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत, जलस्रोतमन्त्री गोविन्दराज जोशीले समेत भारतीय अवरोधकै कारण कालापानी क्षेत्रको भ्रमण स्थगित गरे ।
जनयुद्धपछि प्रचण्डले पटक–पटक दिएका अभिव्यक्तिले तत्कालीन माओवादीका मूलभूत एजेन्डामध्ये सीमा पनि एक हो भन्ने छनक दिन्छन् । तर, प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पटक–पटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरे । एकपटक पनि कालापानीलाई छलफलको एजेन्डा बनाउने जमर्को गरेनन् । कटवाल प्रकरणले सरकार ढलेपछि तत्कालीन माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन भन्दै आफ्ना नेताहरूलाई विभिन्न सीमा क्षेत्रमा खटाएकै हो । अध्यक्षका नाताले ‘कालापानी’ प्रचण्डको भागमा परेकामा भौगोलिक कठिनाई र मौसमको बहाना बनाएर उनले कार्यक्रम टनकपुरमा सार्न लगाए । त्यति मात्रै होइन, लिपुलेक पुग्ने भनेर गएका प्रचण्ड ब्रह्मदेवमण्डी पुगेर काठमाडौं फर्किए ।
अहिले प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली स्वस्थ छैनन् । उनलाई यो बेला यस्ता विषय सम्झाउनु प्राविधिक दृष्टिले ठीक नहोला । तर, यो कुरा जनतालाई थाहा दिनै पर्ने भयो । ओलीले सत्तामा नहुँदा पटक–पटक कालापानीलाई राजनीतिक कार्डका रूपमा प्रयोग गरे । सत्तामा रहँदा भने यो मुद्दालाई एकपटक पनि औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष उठाएनन् । अहिले कुटनीतिक नोट पठाइएको कुरा र सर्वदलीय बैठक बोलाएको कुरा प्रकाशमा आएको छ, भाषणको कुरा त के गणना गर्नु ।
तत्कालीन समयमा विपक्षी भूमिकामा आफ्नो पार्टी रहँदा ओलीले २०५५ साउन २५ मा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन भन्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न संसदीय विभाग प्रमुखको हैसियतले सदन स्थगनकै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, दुई पल्ट प्रधानमन्त्री भई भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दा उनले त्यो बेला आफुले दर्ता गराएको स्थगन प्रस्तावको सम्झनासम्म पनि गरेनन् । बरु, टेलिभिजन कार्यक्रममा अर्कालाई कटाक्ष गरे । उनलाई यसो गर्न सोभा दिँदैन । किन भने, उनी देशको सरकार प्रमुख हुन् ।
कुरा ओलीको मात्रै होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाको वरीयतामा तेस्रो स्थानमा रहेका झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री नभएका बेला सीमाबारे उग्र विचार राख्थे । तर, आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा यिनले पनि सिन्को भाँच्नेसम्म जमर्को गरेनन् । माधवकुमार नेपाललाई त झन कुटनीतिक क्षमता भएका नेता भनिन्छ । उनले २०५७ वैशाख २९ गतेको घटनासम्म सम्झिँदैनन् । उनी सीमाकै मुद्दालाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुई घन्टा धर्ना बसेका थिए, त्यो बेला । जुन बेला परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेको राष्ट्रपति भवन रहेको ठाउँमा थियो । प्रधानमन्त्री हुँदा यसबारे नबोलेका उनी अहिले मुलुकै एक नम्बर पार्टी, त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख हुन् । त्यति मात्रै होइन, उनी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको समेत सदस्य हुन् ।
जिम्मेवारी लिनेमान्छेहरुले आफ्नै कार्यकालमा काम गरेको राम्रो, अन्य समयमा मुख बजाएर के अर्थ ? नभए किन हेप्दा हुन्, पूर्वराजदूतले । नापी विभागमा काम पूर्वमहानिर्देशक र परराष्ट्रमा काम गरेका पूर्वअधिकारीहरुको ‘रोईकराई’ पनि त्यही हो । हिजो पदमा हुँदा के हेरे ? प्रश्न त उठ्ला नि ! लिम्पियाधुरा वा सुस्ताको कुरा मात्रै होइन, सन् १९८० देखि २००७ सम्म ऐतिहासिक दस्तावेज हेरेर सीमा नक्साहरु बनाइयो । दुबै मुलुकले मान्ने गरेर पिल्लरको संकेत र प्रत्येक पिल्लरको कोअर्डिनेट उल्लेख गरियो । अहिले नापी विभागको वेबसाइटमा राखिएको नक्सा जुन छ, यो त्यही बेलादेखि नियमित प्रकाशन हुँदै आएको हो । नापी विभागमा अहिले काम गरिरहेका कर्मचारीहरु त त्यो बेला जन्मिएकै थिएनन् । यत्रो कालखण्डसम्म कसले रोकेको थियो ?, यो विषयको छिनोफानो गर्न । एकफेर आत्म समीक्षा गर्ने कि ?
‘संविधान ढुंगामा कुँदेको अक्षर होइन, यसलाई संशोधन गरौँ’ बिहिवार, आश्विन २, २०७६, १६:२२:००
यति धेरै ठाउँमा किन गर्नु पर्‍याे वडा अध्यक्षकाे चुनाव ?–यस्ता छन् कारण केही जनप्रतिनिधि उम्मेदवारी दिनु पहिल्यैदेखि विरामी रहेका कारण निधन भएको र केही अकस्मातको विमारले मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् । एकाध जनप्रतिनिधि वडाअध्यक्षको पदमा पुगेर पनि सम्हालिन सकेनन्, आत्महत्या गरे । आइतवार, मंसिर १५, २०७६, १३:३६:००
प्रकाश चन्दको हातमा आएकै हो त विद्यार्थी आन्दोलन ? मंगलवार, मंसिर १०, २०७६, १८:३४:००